aajavoli~ बिहार चुनाव 'कां बा' : नीतीश की तेजस्वी ? ~ बिहार चुनाव 'कां बा' : नीतीश की तेजस्वी ?
बिहार चुनाव ‘कां बा’ : नीतीश की तेजस्वी ?
लोकू बराघरेको डिजिटल रिपोर्ट,
ऐजेन्सी । भारतको बिहारमा २४३ सिटको लागि विधान सभाको निर्वाचन २८ अक्टुबरबाट शुरु हुँदैछ । दोस्रो र तेस्रो चरणको चुनाव नोभेम्बर ३ र ७ मा हुनेछ । कोरोनाको संकटबीच हुन लागेका चुनावलाई भारतमा निकै महत्वको साथ हेरिएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारसँग विपक्षी दलहरुको महागठबन्धन चुनावी मैदानमा भिड्दै छ ।
निर्वाचनमा चार ओटा मूख्य गठबन्धन चुनावी मैदानमा रहेका छन् । एनडीए, महागठबन्धन, ग्राण्ड डमोक्र्याटिक फन्ट र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गठबन्धन मुख्य रहेका छन् ।
एनडीएमा गठबन्धनमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) तथा वीआइ, हिन्दूस्तानी अवामा मोर्चासहितका पार्टीहरु एक ठाएामा उभिएका छन् । जसको नेर्ततव वर्तमान मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले गरेका छन् । जदयूले १२२ सिटमा, बीपी १२१ सिटमा र बाँकी अरु साना दलले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
महागठबन्धनमा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) तथा वामपन्थी पार्टीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । जसको नेतृत्व तेजस्वी यादवले गरेका छन् । जसमा राजद ले १४४ सिटमा, कांग्रेसले ७० सिटमा र वामपन्थी पार्टीहरुको तर्फबाट २९ सिटमा उम्मेदवारी दिएका छ ।
महागठबन्धनले रोजगारी मुख्य मुद्दा बनाएको छ । तेजस्वीले आफू मुख्यमन्त्री भएमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् । साथै कृषि सम्बन्धि कानुन खारेजी र सुशासनको मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
बिजेपीले अपत्यारिलो बिहारभरी निःशुल्क खोप लगाउने र १९ लाखलाई रोजगारी दिने संकल्प पत्रमा जनाएको छ । जसको निकै अलोचना पनि भइरहेको छ ।
सन् २०१५ भन्दा अहिले महागठबन्धनमा चुनावी लहर बढेको छ । तेजस्वी यादवका आमसभामा लाखौको भिड लाग्ने गरेको छ । तर यो पटक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहका सभामा भने कम उत्साह र कम उपस्थिति रहेका एनडीटिभीले जनाएको छ ।
भारतका संचार माध्यमले गरेका पोल तथा चुनावी सर्वेक्षणले भने नीतिश कुमार फरि पनि सत्तमा आउने देखाइ रहेका छन् । तर यस पटक महगठबन्धन पनि निकै प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । तेजस्वी यादवले युवामा आशा र भारोसा जगाउन सफल भएका छन् । उनी चुनावी सभामा निकै खुशी र आशावादी देखिन्छन् । र, नीतीश कुमारमाथि तिखो हमला गरिरहेका छन् ।